Deedoke: 10/01/2006 - 11/01/2006
တကယ်တော့ ဒီစာမှာပါတဲ့နည်းပညာကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားပါ။
ဒီစာထဲက အသက်၉၁နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ John Dobson ရဲ့ဘဝအကြောင်းက သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ရပ်တွေ၊ ဇွဲနပဲကောင်းပုံတွေဟာ အားကျအတုယူစရာ ကောင်းလွန်းလို့ဝေမျှတာပါ။
အနည်းငယ်ရှည်တာကတကြောင်း စာရိုက်မကျွမ်းတာကတကြောင်းကြောင့် အပိုင်းခွဲပြီးနည်းနည်းချင်းတင်မယ်လို့စိတ်ကူးပေမယ့်၊ ဖတ်သူဆန့်တငံ့ငံ့ဖြစ်မှာစိုးလို့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အတော်များများကတည်းက ကြိုးစားရေးခဲ့တာ ဒီကနေ့အပြီးသတ်ပါတယ်။
Vedanti ကိုဝိဒန္တာလို့ရေးထားမိတာ “ဝိဒန္တီ” လို့ပြောင်းဖတ်ပေးပါ။
တလောကပေါ့ ကားပေါ်ကနေ ဆံသအလှပြင်ဆိုင် (hair saloon)
တစ်ခုရှေ့က (ခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ဘူးမှာပါ) လည်နေတဲ့အနီအပြာရစ် သင်္ကေတကိုတွေ့မိတော့ ဆရာကြီး ဂျွန်ဒေါ့ပ်ဆင် John Dobson ရဲ့
TV မှာကြည့်ဘူးတဲ့ သူ့ရဲ့ pattern (re)generation ဥပမာကိုသတိရမိသဗျား။
ပြောချင်တာက အဲဒီဥပမာ မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ John Dobson ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းပါ။
နက္ခတ္တပုလွေဆရာ၊ ကြယ်ဘုန်းတော်ကြီး အစရှိသဖြင့် ဂုဏ်ပုဒ်များပိုင်ရှင်
John Dobson ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်သုံးခု (နှစ် ၃၀) မှာ ဝါသနာရှင်နက္ခတ္တပညာလောကမှာ ထည်းထည်းဝင်ဝင် ပြောစမှတ်
၁၉၁၅ မှာမွေးတဲ့ John Dobson ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ပီကင်း ဇာတိပါ။ ၁၉၂၇ မှာတရုတ်နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်လို့ John Dobson မိသားစုဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၄၃ ရောက်တော့ ဘာကလေးတက္ကသိုလ်က ဓာတုဗေဒ အဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ ခေတ္တ စစ်မှုထမ်းပြီး မကြာခင် ၁၉၄၄မှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုက ဝိဒန္တာ ကျောင်းတော် Vedanti Monastery မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ (ဝိဒန္တာဟာ ဟိန္ဒူကျောင်းတော်ဖြစ်ပြီး ဘာတွေကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတော့မသိပါ) အဲလိုနဲ့ ၂၃နှစ်ကြာလာတော့ The Order (ဘာသာရေးအဖွဲ့လို့ယူဆရပါတယ်)က Dobson ကိုတာဝန်တစ်ရပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရေးကိုသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ယှဉ်ပြီးပို့ချဘို့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတုဗေဒဘွဲ့ရ Dobson ဟာ စကြာဝဠာကြီးဘယ်လိုတည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း အလွန်အမင်းသိလိုတာဖြစ်လို့ ၁၉၅၆မှာ စုံစီနဖာရောင်းတဲ့ဆိုင်ကဝယ်ယူခဲ့တဲ့၂လက်မ မှန်ဘီလူးနဲ့ (မျက်စိနှစ်ဘက်လုံးကြည့်လို့ရတဲ့ မှန်ပြောင်း Zeiss binoculars အဟောင်းကဖြုတ်ယူထားတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ဘီလူးပါ)သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုစတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ စနေဂြိုဟ်ခါးပတ်ကိုတောင်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ အဝေးကြည့်ပြောင်း“မှန်”
ကိုတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဘုန်ကြီးတစ်ပါးကမှာလို့ သင်္ဘောဘေးက ၁၂လက်မမှန်ဝိုင်းကိုသွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မှန်ပြောင်းနဲ့ မပြည့်တပြည့် “လ”ကို အံ့အားတသင့်ကြည့်ရှုမြင်တွေ့ပြီးချိန်မှာတော့ သူ့ခေါင်းထဲဝင်ရောက်လာတာက “လူတိုင်းဒီအံ့ဩဘွယ်တွေကိုရှုမြင်ရမယ်” ဆိုတာပါဘဲ။ အဲဒီမှာတင် သူဟာအများပြည်သူအတွက်သူလုပ်ငန်းကိုစတင်နစ်ဝင်ပါတော့တယ်။
၁၉၅၈မှာ Dobsonဟာ ဆက္ခရာမန်တို Sacramento က ဝိဒန်တာကျောင်းကိုရွှေ့ပြောင်းရပါတယ်။ အဲဒီမှာ မှန်ပြောင်းလုပ်ငန်းကို ထည်းထည်းဝင်ဝင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာဖြင့် ၅လက်မ ဖန်ချိုင့်အောက်ခြေကို လှီးဖြတ်ပြီး ရောင်ပြန်မှန်အဖြစ် သုံးလိုက်ပါတယ်။ ပီတိအဟုန်နဲ့ Dobson ဟာ သူ့ရဲ့မှန်ပြောင်းနဲ့ရှုမြင်ရသမျှအကြောင်းအရာတွေကို ရောင်းရင်းတွေကြားမှာ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် မျှဝေတော့တာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆိုရင် “ကိုယ့်လူတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကို တွေ့ရှိတီထွင်ထားပါကလား” ဆိုပြီးရင်သပ်ရှုမောဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်္ဘောပျက်ကမှန်ဝိုင်းအချို့ကိုတောင်စွန့်ကြဲခဲ့လို့မြေဩဇာပုံးတွေထဲထည့်ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲခိုးသွင်းခဲ့ရပါတယ်။ (Dobson ရဲ့အလုပ်တွေကို ကျောင်းဝင်းထဲခွင့်မပြုဘူးလို့ယူဆမိပါတယ်)။
Dobsonဟာမှန်တွေသွေးဘို့(မှန်ဘီးလူးဖြစ်အောင်ပြုပြင်တာပါ)သဲကိုကိုယ်တိုင်ရှာရ၊ ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ် ကျောင်းဥယျာဉ်သုံး ဖဲရပ်စ်ဆာလဖိတ်၊ အောက်ဆလစ်အက်ဆစ်တို့ကိုသုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းတော်ရဲ့အမူအကျင့်၊အင်္ဂါရပ်နဲ့ မသင့်တော်ဘူးပြောမှာစိုးလို့ သူ့ရဲ့ အများပြည်သူအတွက်တီထွင်မှုကို ကျောင်းတွင်းကအခြားသံဃာတွေမသိစေပါဘူး။ မှန်သွေးရင်အသံထွက်လို့ ရေမှာနှစ်သွေးပါတယ်။ ဘုန်ကြီး Dobsonဟာငွေကြေးလည်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့မှန်ပြောင်းတွေဟာ ရေပိုက်ရစ်တဲ့သတ္တုခွေအ၀ိုင်းတွေ၊ တိုလီမုတ်စ သစ်တိုသစ်စတွေ၊ စတာတွေနဲ့တပ်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ ပကာသနမဲ့တဲ့အတွက် ဒေါ့ဘ်ဆင်နည်းပညာတပ်ဆင်မှု(Dobsonian mount)လို့တောင်သမုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနည်းဟာ သူများလုပ်ဘူးပြီးသားပါ။
စိတ်စေတနာဟာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းလုပ်ချင်စိတ်အားကြီးလာစေတဲ့အပြင်၊ ကျောင်းတော်အုပ်ချုပ်သူတွေက (ကျောင်းအင်္ဂါရပ်နဲ့မညီလို့ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့) ကျောင်းကသူ့ကိုပယ်ထုတ်စေချင်အောင်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမြင်စုတ်တဲ့မှန်ပြောင်း (နက္ခကြည့်) ကို ပံ့သကူရတဲ့ လှည်းဘီးဟောင်းတွေတပ်ဆင်ပြီး ကျောင်းပရဝဏ်ပါတ်လည်ကလူနေအိမ်တွေနားမှာ ကလေး၊လူကြီး သဘောကျ ညဉ့်ကာလရဲ့ကောင်းကင်ကို လှည့်လည်ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လူတွေဟာ သူ့ရဲ့မှန်ပြောင်းကိုသဘောကျလာတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြုလုပ်ချင်လာပြီး Dobsonကိုအကူအညီတောင်းကြပါတော့တယ်။ အဲဒါနဲ့ဘဲ Dobson ဟာ ကျောင်းမှာ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်မှုတွေများလာပါတော့တယ်။ ၂၃နှစ်ကြာကျောင်းတော်မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ (သူ့ရဲ့အများပြည်သူကြည့်ဘို့ မှန်ပြောင်းလုပ်ငန်းတွေကျယ်ပြန့်လာတော့) Dobsonဟာ ၁၉၆၇မှာ သူ့ဝါသနာကြောင့် ကျောင်းမှာနေခွင့်မရတော့တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ သူ့ကိုကျောင်းကထုတ်ပယ်တာဟာ သူမှန်ဘီလူးတီထွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ မဟုတ်သော်ငြားလည်း သူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့အများပြည်သူကြည့်ဘို့ မှန်ပြောင်းလုပ်ငန်းကိုနားမလည်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ဝါသနာကိုဘဲတစိုက်မတ်မတ်လုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ Dobsonဟာ ကားကြုံစီးပြီး ဆန်ဖရန်ဆစ္စကို ကိုလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတိုးလာတာနဲ့အမျှ စားဝတ်နေရေးအကူအညီတွေပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဆန်ဖရန်ဆစ္စကိုရဲ့ လမ်းအချို့ပေါ်ကောင်းကင်ကြည်လင်တဲ့ညတွေမှာ Dobson ဟာသူ့ရဲ့မှန်ပြောင်းအချို့နဲ့အလုပ်စပါတော့တယ်။ လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာ Dobsonမှန်ပြောင်းနဲ့လေ့လာခွင့်ရကြပါတယ် Dobsonကကြည့်ရှုသူတွေဟာဘာတွေတွေ့မြင်ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ်။
(ဒါဟာ ပလက်ဖောင်းနက္ခတ္တပညာရှင်များအဖွဲ့ရဲ့ အလေ့စရိုက်ဖြစ်နေဆဲပါ။)အခါအားလျော်စွာ Dobsonဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ မှာရှိတဲ့ဂျူးဘာသာဝင်အဖွဲ့နဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို သူ့ရဲ့ မှန်ပြောင်းနဲ့ နက္ခဗေဒ ပညာတွေပို့ချနေခဲ့ရတာ ယခုထက်တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Dobson ရဲ့ကြီးကြပ်သင်ကြားမှုခံယူခဲ့တဲ့ တစ်ချို့လူငယ်တွေဟာ လူမှု-ပြည်သူ့အကျိုးပြုအဖွဲ့ “ပလက်ဖောင်းနက္ခပညာရှင်များ--San Francisco Sidewalk Astronomers” အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များပြားလာတာနဲ့အမျှ ကြီးမားကောင်းမွန်တဲ့ မှန်ပြောင်းတွေတည်ထွင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၇၀ မှာအဖွဲ့ဟာ အလွယ်တကူသယ်ယူသွားလို့ရတဲ့ ၂၄လက်မ မှန်ပြောင်းတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။
Dobsonဟာ အထင်ကယဖြစ်တဲ့ ယခင် Scan Francisco နဲ့ Berkeley ဘာကလီးစင်တာ ကဖိတ်ကြားခြင်းခံရပြီး သင်ကြားပို့ချမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောင်၂၆နှစ်ကြာနောက်ပိုင်းမှာ နက္ခဗေဒသဘောတရား၊ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာစကြာဝဠာသဘောတရားရေးရာ နဲ့ မှန်ပြောင်းနည်းပညာတွေကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လစ်မှာ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီနဲ့ ဧပြီလတိုင်းပို့ချမှုဟာ သူ့ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်းဆိုသူတွေကြောင့်“BEYOND SPACE AND TIME” “အချိန်နှင့်နေရာ၏ဟိုမှာဘက်” စာအုပ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ “THE MOON IS NEW” “အသစ်စက်စက်လကမ္ဘာ” စာအုပ်ဟာထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းက လူကြီးလူငယ်တော်တော်များများဟာယခု John Dobson ကြောင့် နိဗ္ဗာန်ဘုံ စကြာဝဠာကို ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါပြီ။ သူ့ရဲ့အနစ်နာ၊ ဝါသနာကြောင့် ယခင်က မဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နက္ခကြည့်မှန်ပြောင်းနည်းပညာတွေဟာ ယခုအခါမှာအများပြည်သူလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာ ပြုလုပ်နိုင်နေပါပြီ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/30/2006 04:21:00 PM3comments
Lets Wish for Freedom of Truth
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/29/2006 12:09:00 PM3comments
“ဒီဝဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်” က သဘောကျစရာလေးပါ။ ဒီဆိုဒ်မှာအခြားစိတ်ဝင်စားစရာ
tools တွေလည်းရှိပါတယ်။ အပေါ်ပုံက ဒီးဒုတ်ဘလော့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်း-ယနေ့ထုတ်ပေါ့။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/27/2006 02:59:00 PM0comments
အဲဒါ..ဦးနှောက် စုနမိ (tsunami) ပေါ့ကွဲ့။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/26/2006 11:26:00 PM0comments
အောင်မလေး Blogger ရယ် စိတ်ကိုပူလိုက်ရတာ။
ဘာများဖြစ်လည်းလို့။ နောက်ဆို status.blogger.com ကို
ကာတွန်းထဲကလို Google ကလူတွေ
We experienced an outage this evening due toaproblem in our networking hardware, sigh!. This caused our users to lose access to both Blogger and BlogSpot for some time. This has been fixed and things should be back to normal.
Posted by Prashant at 20:07 PDT
We are experiencing some troubles with one filer. This affects publishing to some of the blogs and they will not be available for viewing on blogspot.
Update: The issue has been fixed. Thanks for your patience.
Posted by Prashant at 11:24 PDT
Tomorrow we will have an outage of 60 minutes from 2p to 3p (Pacific Time) as we perform some hardware repairs.
Update: This maintenance was completed successfully.
Posted by Pal at 15:39 PDT
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/26/2006 10:37:00 AM6comments
စာသားတွေပါ။ မကြာသေးခင်က မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား
သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တေးမြုံငှက် တေးစုအကြောင်း
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/25/2006 11:19:00 AM0comments
ဘာအတွက်ဘဲသုံးသုံး အရောင် နြီပာစိမ်း Hex တန်ဘိုးတွေ
အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ဖို့ -ဒီဆိုဒ်(link)-ကရတာပါ။ Free ပါခင်ဗျာ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/24/2006 10:23:00 PM0comments
မီးမြေခွေး ၂.၀ အာရ်စီ ၃
အိုင်အီး ဆဲဗင်း နဲ့အပြိုင်ပေါ့။
များမကြာမီမှာ နောက်ဆုံးအဆင့် အပြီးသတ်ထွက်လိမ့်မယ်လို့
မီးမြေခွေး ၂ က ထွက်နေပြီဗျို့။ ဆောရီးပါခင်ဗျာ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/24/2006 10:03:00 PM0comments
ဒီဟာက ရယ်လည်းရယ်ရ စိတ်ကသိကအောက်လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟာသစမ်းသပ်မှုကလေးပါ။
၁။ ခုံမှာထိုင်ပါ။ ညာခြေကိုရှေ့ကိုဆန့်ပြီး နာရီလက်တံအတိုင်းအဆက်မပြတ်လှည့်ပါ။
၂။ ညာလက်ကို ရှေ့ဆန့်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို “6” ကိုအဆက်မပြတ် လေထဲမှာရေးပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/21/2006 10:41:00 PM2comments
ဒီဆိုဒ်မှာ Online နှိုးစက်ဆိုလို့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာကွယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်များများလောက်က ကွန်ပျူတာကို သုံးသုံးမသုံးသုံး၂၄နာရီလုံးဖွင့်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့အလုပ်ဖြစ်နိုင်သား။ Monitor ပိတ် Speaker ကို ကိုယ်နိုးလောက်မယ့် volume မှာထား။ ခုတော့ လျှပ်စစ်ပါဝါဖိုးတွေကြီးမြင့်လာတော့ သုံးမယ့်အချိန်လောက်ဘဲဖွင့်တော့တယ်။ (Energy Saving)ပေါ့။ (Alarm နာရီတွေကလည်း ခုဆိုရင်ပေါမှပေါ)။ ကြောင်တောင်တောင်တော့နိုင်တယ်ထင်ရပေမယ့် သူ့အိုက်ဒီယာလေးမဆိုးဘူးလို့လည်းယူဆမိပါရဲ့။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/20/2006 11:04:00 AM0comments
Bloggers are not harmful?
I Just want to share some words (that I like)regarding the blogging and bloggers.( I have just read at this link.)
Bloggers are not….
…perfect. Like me, they are prone to errors. We humans are creatures of emotions. That remains our strongest arrtibute and our most damning curse. We are often made to be the idiots we sometimes call others, purely because we are overcomed by emotions. Envy, hate, among some.
a blogger, one that carriesamoral, social and legal responsibility….
These words are copied fromaflash blog (good one)which talks about Jeff ooi,aMalaysian well-known blogger. (I had met him in India in Feb,2005. I don't know him personally.)
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/18/2006 11:00:00 AM0comments
အာလူးဖုတ်တာလား ဟောကိန်းထုတ်တာလားတော့မသိဘူး၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာတွေကတော့ နှစ် ( ၁၀၀,၀၀၀)တစ်သိန်းအကြာမှာ လူမျိုးနွယ်စု ၂ခုအဖြစ်ကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုသဗျ။ လူသားမျိုးနွယ်တိမ်ကောခြင်းရဲ့အစမတိုင်မှီကလေး၊(လူ့ဘဝကို)နည်းပညာကိုသာအမှီသဟဲပြုကြရတော့မယ့် နောင်နှစ်ပေါင်း၃၀၀၀လောက်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေအမြင့်မားဆုံးအချိန်လို့ လည်းဆိုထားသေးတယ်။ ချစ်ကြင်ဖော်ရွေးချယ်ရတာခက်လာပြီး လူမျိုးစိတ်ကွဲများပေါ်ထွန်းလာစေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်စွက်ပြောဆိုထားကြပြန်ပါသေး
တယ်။ မျိုးဗီဇအထက်တန်းစားများက ကျန်းမာသန်စွမ်းမယ်၊ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်။ မျိုးဗီဇအနိမ့်စားများကတော့ ရွဲပြီးရုပ်ဆိုးမယ်၊ သရဲသဘက်လေးပုံပေါက်မယ်လို့ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ဆိုထားသဗျ။
ဒီထက်မကအသေးစိတ်တင်ပြချက်တွေက အတော်သွေးလန့်စရာကောင်းသဗျ။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့
BBC-ဘီဘီစီရဲ့ဒီ link မှာဖတ်ကြပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/18/2006 10:04:00 AM2comments
ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘိုစာညံ့လို့ လွဲချော်နေတာတွေကို
Just tried to write with my socalled-english.
Pls. correct me if you find the inappropriate usage
or whatever unsuitable.
not far fromasmall hill
withareddish-brown stem, besides.
But just likeapost.
The butterfly giggled...hadaglance at it.
Then flee to the stream
"There were cleaner pubbles"...he said.
Two men arrived now and then.
Fell down just beside the tree
Get fast asleep.
The tongue got out as they were so weak.
Was named "The left" and "The right".
Whatawise tree it is.
Had sympathy on them
And murmured softly to the men.
Oh see..the Lord gave it the chance
To stretch out the branches and bear fruits.
WHAT A HAPPY TREE!
Loads of branches and fruits.
Two fellows woke up..open their mouth wide...
The tree just chuckled..makingashake.
"The left" and "The right" started their inside out.
They snatched and ate all the fruits.
They picked all the leaves
Covering their bodies.
Layered out the bark..to makearope.
Tied and pulled down the tree.
It murmured painfully.
iT...m U R m U r Ed....PaInfUlLy.
Tookalook at the tree
The Lord just sighed.
Falling tree just hadalook at the men..
What kind of fellows you are!
Then broke down by the root.
As the times flied..
The tree grew by itself
as before likeareddish-browny stem..
'OH..NO'.....his wish never filled
Load of branches and fruits..AGAIN!
There were things he could..
Coiled the stem..thichened the bark...
with full of spikes.
With brittle leaves and bittered fruits.
Winding the branches.....so chaotic as much as it could.
Written in remembrance of timber works and natural resources in
especially for the (LDC)countries with certain natural reserves
which are surrounded by resource-hunry countries
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/17/2006 03:35:00 PM0comments
အခုတလော google က ဟိုဟာဝယ်ဒီဟာဝယ်တွေကြားနေရတယ်။ ယခင်က အကြီးမားဆုံးလို့ယုံကြည်ထားရတဲ့ Microsoft တောင်မှ ချွေးတဒီးဒီးကျအောင် google နဲ့အပြေးလိုက်နေရပြီ။ ဒီကာတွန်းကတော့ ပြုံးချင်စရာပေါ့။ ကဲ blogger တွေ ရေးထားကြနော်။ တော်ကြ google ယောင်ပြီးမှားဖျက်မိတဲ့အထဲပါသွားရင် စိတ်ပိန်စရာတော့အကောင်းသားဗျ။ ကာတွန်းဆရာက Dave Walker ပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/16/2006 03:29:00 PM0comments
လျှို့ဝှက်ထားချင်တဲ့ text file
Hiding staff file can not be seen here anymore.
(If you want to see it, pls. go to Techtray.
Credit goes to James@
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/16/2006 02:37:00 PM0comments
၁၉၄၇ က ငွေတစ်ဆယ်နဲ့ ၁၉၉၆ ထုတ်ငွေတစ်ဆယ်
ဒီဝဘ်ဆိုဒ် မှာ မြန်မာပြည်မြေပုံနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်သုံးစွဲခဲ့တဲ့
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/11/2006 11:41:00 PM 1 comments
“ဝဲ” နဲ့ “ယျာ” တဲ့
အဲဒီမှာတင် “ဝဲ” နဲ့ “ယျာ” ဟာဇာတ်လမ်းစတော့တာကလား..
အခေါက်ပါးပါးလေးတွေကို တစ်လွှာချင်းခွာပြီး ကြိုးတွေလုပ်ကြတယ်။
သစ်ပင်ကိုချည်နှောင်ကြပါကောလား။ ပြီးတော့ ဆွဲပြီးလှဲချကြတယ်။
ခပ်စွေစွေလေးဘဲ “ဝဲ” နဲ့ “ယျာ” ကိုကြည့်နေနိုင်ရှာတယ်။
ကိုယ်ထူကိုယ်ထနဲ့ဘဲ သစ်ပင်ဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့တယ်။
နောက် အသီးအပွင့်တွေ ဝေဆာလာပြန်တယ်။
အကိုင်းတွေကို မီးကုန်ယမ်းကုန် ရှုတ်ထွေးစေပြန်သေးတယ်။
အထူးသဖြင့် သယံဇာတဆာလောင်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေဝိုင်းဝန်းနေတဲ့
သယံဇာတ အနည်းအကျင်း ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေက
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/11/2006 04:20:00 PM0comments
ဒီကာတွန်းလေးထဲကအတိုင်းဆို Blogger တွေဝေမျှခဲ့သောကောင်းခြင်းတွေက အများသား…
….(နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ကိုးပြီး နှိုးဆော်ချင်ပါတယ် အဟီး…share ကြ shareကြ)
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/11/2006 09:17:00 AM2comments
Credit: original pictures creator
(The pictures are probably not GPL).
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/10/2006 09:54:00 AM 1 comments
နျူကလီးယားလက်နှက် မြေအောက်မှာအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ဖောက်ခွဲပြီးစီးသွားပြီဆိုပါလား။ (တောင်ကိုရီယားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတွေရဲ့အဆိုအရတော့ မနေ့ကမနက် ၁၀း၃၆ နာရီလောက်မှာစမ်းသပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်)။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဗဟိုသတင်းအဖွဲ့ကတော့ “ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ရရှိတာဟာသမိုင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူလူထုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းပါးပါသည်” ဟုကြေငြာသကိုးဗျ။
(Kim Jong-Ii ကင်ဂျုံအီ မွေးဖွားချိန် ၁၉၄၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ရက် သူ့ရဲ့ဇာတိမှာ သိပ်တောက်ပတဲ့ကြယ်တစ်စင်းနဲ့ သက်တန့်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ ပြုံယမ်းသတင်းအရဆိုထားပါတယ်။ လေ့လာသူတွေကတော့ သူ့ဖခင် စစ်အတွင်း ရုရှားမှာရှိနေစဉ် အဲဒီမှာမွေးတယ်ဆိုပြန်ပါတယ်။ US သမ္မတ ဘုရ်ှကတော့ pygmy လူပုကလေးလို့သမုတ်ဘူးပါတယ်။)
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/09/2006 11:40:00 AM3comments
meez.com ဆိုတဲ့ဆိုက်ဒ်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ ကျွန်တော့်ပုံပေါ့...
ဆံပင်ပုံ၊ မျက်နှာ၊ အဝတ်အစား၊ နောက်ခံ၊ ...စသဖြင့်စိတ်ကြိုက်
Sun JRE တော့ Install လုပ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။
original က animated gif ပါ။ bloggerက png ပြောင်းလိုက်လို့
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/08/2006 12:13:00 AM0comments
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/07/2006 11:46:00 PM0comments
ယခင်ဖတ်ဘူးတဲ့ စာနည်းနည်းရယ် အတွေးတစ်ချို့ရယ်ပါ။
ဟိုတလောက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ရောင်းမလိုလို၊ငှားမလိုလို
ဒါကြီးက လွယ်လွယ်နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲ။ လူထုဦးလှရေးသားခဲ့တဲ့
"ကျွန်တော်ဗျူရိုကရက်" ဆိုတဲ့ အတ္ထုပတ္တိပုံစံစာအုပ်ထဲမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို
မတရားအကောက်တွေရယူပြီးမှ ဖော်လံဖားတဲ့အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံအထိမ်းအမှတ်ပုံစံ
ပုံရိပ် တော်တော်များများဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ အထင်အရှားရှိနေတယ်ဆိုတာ
ငြင်းလို့မရပါဘူး။ သစ်ပုတ်ပင်၊ အင်းလျား နဲ့ ဂျဒ်ဆင် ဆိုတာတွေက
ဒါတွေနဲ့အတူ ပညာရေးစံနစ်ကြီးကလည်း ဝေဝါးနေပါတယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/06/2006 03:01:00 PM0comments
ကိုလင်းဆက်၊ မောင်လှ site တွေက Tutorial တွေကြည့်ပြီး အားကျလာတာနဲ့
Photoshop CS မရှိလို့ Ver7 နဲ့ဘဲ စမ်းကြည့်တာပါ။
Tutorial ကတော့ ဒီ link မှာပါ။
ကိုယ့် Blog ပေါ်သုံးဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။
စမ်းသပ်ကြည့်ရုံ သက်သက်ပါ။ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်လုပ်ထားလို့
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/05/2006 01:58:00 PM 1 comments
မီးလျံမြေခွေး ၂.၀ အာရ်စီ ၁
Mozilla က မီးလျံမြေခွေး Firefox ver 2.0 rc1 ထွက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။
မီးလျံမြေခွေး သုံးသူများ ဒီလင့်မှာ သွားဆွဲချပြီး သုံးကြပါ။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/05/2006 01:25:00 AM0comments
မြောက်ကိုရီးယား နဲ့ 'နျု့'
Pic: Toshiko Hara
ဒါတောင် ၂၀၀၅ စက်တင်ဘာတုံးက 'နျု့' နဲ့ အဆက်
ဖြတ်ပါတော့မယ်လို့ အပေးအယူ မျှခဲ့ပြီးသားပါ။
အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးပါလား 'ကိုရွှေပြုံယမ်း' ရယ်။
ဒီနှစ် ဇူလိုင်လကလည်း နျု့ တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ ဒုံးပျံတွေ
ဂျပန်၊တရုတ် နဲ့ တောင်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်တွေ
ချွေးစို့ခေါင်းစား ကြတော့မယ်။ သူတို့ရဲ့ အနီးဝန်းကျင်
"မလုပ်ပါနဲ့ ဦးလေးရယ်.." လေသံပျော့လေးနဲ့ပေါ့။
ဆရာကြီး အန်ကယ်ဆမ် (U.S)ကတော့ ဖြတ်မယ် တကဲကဲ
ပေါ့ (စီးပွားရေး ...စီးပွားရေး...)။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တဇောက်ကန်းတွေ အုပ်ချုပ်နေရင်တော့...
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/05/2006 12:20:00 AM0comments
၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၇ မှာ ကိုဖီအာနန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နေရာကို တောင်ကိုရီးယားက Ban Ki-Moon ဘန်ကီမွန် နဲ့အစားထိုးတော့မှာ သေချာသလောက်ရှိသွားပါပြီ။
ပြင်ဆင်ချက်။ ။ Mr. Ban ဟာအရွေးချယ်ခံရဖို့ သေချာသလောက်ရှိတာပါ။ လုံခြုံရေးကောင်စီဝင်နိုင်ငံ အများစုကထောက်ခံမှုရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/03/2006 08:21:00 AM0comments
မကြာခင်က ဘီဘီစီ မှာ ရွှေနိုင်ငံကြောင်းပြသွားပါတယ်။
ဘီဘီစီ အာရှသတင်းထောက် အင်ဒရူးအာဒင်က တိုးရစ်စ် တစ်ယောက်လို
သတင်းစာဆရာကြီး လူထု ဦးစိန်ဝင်း ရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
ကိုမြင်ရတာ အတော့ကို ဂရုဏာဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီစကားတွေကြောင့်(BBC မှာပြောမိလို့) ထောင်ထဲမှာသေရနိုင်ပါတယ်....
ကိုသူရ (ဇာဂနာ) ကလည်း တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုတွေကြားကဘဲ
သူ့ရဲ့ ပြက်လုံးတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အသိနိုးကြားစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆေးရုံတစ်ခုက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ချို့၊ လမ်းဘေး လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ
ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲပြောပြော၊ ဘယ်သူကမှန်တယ် မမှန်ဘူးဆိုတာထက်
လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ မြန်မာဟာ အခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင်
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/01/2006 04:29:00 AM0comments